Otu esi eme compost maka ubi gị na akwukwo nri ubi gị site na nkwụsị - Ikkaro
Inicio >> Ugbo >> Ngwakọta >> Esi compost
Gịnị kpatara compost?
Enwere ọtụtụ ihe mere compost. Ana m ekwu maka compost emere n’ụlọ. Ndị mere m ka m mee ya bụ:
Ana m erite uru nke nnukwu mkpofu ahịhịa gara na mkpofu.
Anọ m na-ejigharịkwa ihe niile fọdụrụnụ nke ịkpụ na ịkwa osisi bụ ndị fọdụrụ n'ime ikpo na ubi mkpụrụ osisi na-eche ka ọkụ gbaa
M ga-enweta compost maka ubi m jikwaa melite ala
Nzọụkwụ 1. Họrọ saịtị na ogige
Họrọ ebe na Ngwakọta nke ị ga-enwe. Edebewo m ya n’ebe na-agaghị adịte aka n’agbata mkpụrụ pọmigranet 2, ebe nwere ndò zuru ezu n’ihi na akwadebebeghị m ebe mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi chọrọ ka m hapụ ya kpamkpam.
Echere m na ị nweela onye ngwakọta, ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịme ihe masịrị gị nke m ji pallet rụọ, ma ọ bụrụgodi na ịchọghị ime ka o sie ike, enwere ndị na-eme ya n’ala wee jiri tarp ekpuchi ya.
Nhọrọ ozo bu zụta otu.
Atụla egwu na ịnweghị ebe obibi, enwere ndị na-eme mkpọkọta n'ala ma jiri tap kpuchie ya.
Nzọụkwụ 2. Akpa uwe
Malite composting ozugbo na ala, etinyela ntọala ọ bụla. n'ụzọ dị otú a, ọ ga-amịkọrọ leachates ndị e kere eke.
Maka akwa nke mbụ, ha na-akwado ịmalite site na Brown, ya bụ, na epupụta akọrọ, shavings, wdg. Amalitere m na akwa nke akwukwo ahihia.
Moisten na epupụta, tinye mmiri ome osooso, nke ọma zụta, nke ọma a kwadebere dabeere nitrogen. Ma bia, mmiri zuru.
Nzọụkwụ 3. Nkeji nke abụọ
Site ugbu a gaba anyị ga-amalite ịme Sanwichi. Anyị ga-atụba foduru nke ịkpụ, ahịhịa, osisi, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, wdg. na anyị ga-etolite a green oyi akwa na anyị ga-ahụ na-ekpuchi ọzọ aja aja oyi akwa.
Na akwa obula ị gha agbakwunye mmiri ka o kpoo.
Nzọụkwụ 4. Moisten ikpo
Peoplefọdụ ndị dị ka m na-etinye ikpo mmiri, ya bụ, ịgbakwunye mmiri ka a na-agbakwunye akwa ahụ, ndị ọzọ na-ahọrọ ime ya ikpeazụ. O nwedịrị ndị na-ewepụ oyi akwa ka ha gwakọta ihe niile, ha na-ekwu, na-eme ka usoro a dị ngwa dị ka ngwaahịa nitrogen na ndị carbon.
Nzọụkwụ 5. Tojupụta ego
A ga-eme nke a site n'oge ruo n'oge. Ebumnuche bụ ịnweta temometa compost iji hụ ọnọdụ okpomọkụ nke ikpo ya ruru, ebe ọ ga-erughị 60 na 70ºC.
Ọ bụrụ na ọ karịa 70 ọ pụtara na anyị agabigala na nitrogen, ihe na-acha akwụkwọ ndụ na anyị ga-agagharị, ya bụ, wepu ikpo ma tinye aja aja ma ọ bụ carbon.
Ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru 60, ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na enweghị mmiri ma ọ bụrụ na anyị agbakwunyela ihe nitrogen ole na ole ma ọ bụrụ na tinyekwuo na mkpo anyị.
Ngwá ọrụ compost
Ejighị m ihe ọ bụla malite na nke m ji eme ihe bara uru, mana ọ bụ eziokwu na ọ bụ eziokwu enwere ngwaọrụ ndị agbaghara na m chere na m ga-akwụsị ịzụ ma ọ bụ mgbe enwere ike iwulite ha. Ngwaọrụ ndị a bụ:
Ngwakọta. (Can nwere ike ịzụta ebe a o ebe a) Emeela m otu, ọ gụnyere obere mgbalị na ọ na-akwụ ụgwọ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ nke azụmahịa, ha na-ere ọtụtụ ụdị.
Osisi. (Zụrụ ya ebe a) A na-akpọkwa ndụdụ ma ọ bụ ndụdụ, ọ na-eje ozi iji jikọta ikpo compost mgbe ọ na-ere ere ma meghaakwa compost gwụchara
Aerator / igwekota. (Zụrụ ya ebe a) Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ngwa ọrụ ejiri gwakọta compost ma meghee ya, ọ na-enyekwa anyị ohere iwepụ ụtọ iji hụ etu usoro a si aga. Ọ bụ ngwá ọrụ dị mfe.
Compo temometa. (Mkpa HERE) N’enweghị obi abụọ ọ bụla, ihe kachasị m na-atụ uche. Ọ bụ temometa ogologo anyị na-arapara n’otu ikpo ma ọ bụ na silo ma anyị na-ahụ ọnọdụ okpomọkụ n’ime ya. N'iburu n'uche ọnọdụ okpomọkụ anyị ga-ama etu composting si aga ma ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe, moisten, turn, tinyekwuo carbon ma ọ bụ karịa nitrate, wdg.
Ntughari. (Chazụta ebe a) Ahụwo m ya n'thentanet, ọ bụ ezie na anwalebeghị m ya. Onwere ndị tinyere osooso. A pụkwara ime ya n'ụlọ, na-ahapụ ahịhịa ndụ ndụ, ịkpụcha ihe, wdg na mmiri maka ụbọchị 10. N'iji biya mgbe mmanya na-egbu egbu, e nwere ọbụna ndị na-eji mmamịrị nke bara ọgaranya na nitrogen dị ka ome osooso.
Kedu ihe m ga-etinye na compost?
Ihe anyị na-etinye anyị na ikpo compost anyị kewara n'ime ụdị 2. Green, nke bu ihe nile n’enye ya nitrogen na aja aja, nke n’enye ya carbon.
Postkọ ala bụ usoro anyị ji agbanwe ihe ndị dị n’ime ala ka ọ bụrụ compost
Verde (ihe ọ bụla)
Iberibe akwukwo nri na akwukwo nri
ee citrus kwa
nri, karịsịa nke hebivores
Akọrọ kwachaa na-anọgide
mpempe akwụkwọ na-enweghị ink na kaadiboodu
Ọ bụrụ na anyị a attentiona ntị na ọnụego ire ere nke ihe ahụ, anyị nwere ike kewaa ihe ahụ n'ime ụdị 3, mana mgbe niile n'echefughị ​​na ngwakọta nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (nitrogen) + aja aja (carbon) na-etolite na compost.
Mbibi ngwa ngwa
Akwụkwọ ọhụrụ, mkpo ahihia, nri ala, na ahịhịa na osisi niile nwere akwụkwọ nro.
Ahịhịa, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ata ahịhịa ya ma ọ bụ epupụta adịghị nro, nri ma ọ bụ akwa nke nwere ahịhịa ọka, kwachaa ogige dị nro.
Dị nnọọ ngwa ngwa ire ere
Alaka, egghells, nkume mkpụrụ osisi, shells nut, osisi shavings, sawdust.
Iji mee ihe n’oge
Ash, akwụkwọ akụkọ, kaadiboodu
Kedu oke kwesịrị iji?
Dabere na onye ị gụrụ ha na-ekwu maka 40-60, 50-50 ma ọ bụ 60-40 Dopwding nke bụ onye anyị na-a payinga ntị na ntuziaka a na-atụ aro 60-40, ya bụ, 60% okwu ndụ akwụkwọ ndụ na 40% aja aja, nke a Ọnọdụ okpomọkụ ga-ebili nke ukwuu, anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịgabiga ya.
E nwere ọtụtụ akụkọ ifo nke Dowling na-akwụ ụgwọ.
Citrus. Ọtụtụ ndị echeghị, mana ịnwere ike itinye citrus na ikpo. Naanị ihe ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ọtụtụ ga-ejikwa pH.
Ala na ụlọ. Enweghị nsogbu n'iji osisi gbanyere mkpọrọgwụ
Mkpụrụ osisi. Otu ihe a na - eme, ọtụtụ mmadụ kwenyere na ikwesighi ịkọkọ osisi nwere mkpụrụ, n'ihi na ha ga - anọgide na ntanet ma ga - epupụta ma anyị jiri ya. Ma nke a abụghị eziokwu.
Ọ bụrụ na emechara compost nke ọma, ọ ruru okpomọkụ karịa 60 - 70º C karịa karịa iji gbue mgbọrọgwụ ma gbanyụọ mkpụrụ ahụ. na ihe anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eji compost na-arụpụta
My mbụ compost
M na-ede akwụkwọ a mbụ, iji hụ ihe m na-eme ma ọ bụrụ na ọ dị njọ ka m nwee ike ịmụ ebe m dara.
M na-amalite na 25-10-2020 na-eme compost bin site na pallets osisi ma tinye akwukwo medlar a mịrị amị na ahịhịa akpọnwụ akpọnwụ, ntụ. Dika ahihia ahihia, ahihia, nkpuru osisi na akwukwo nri foduru, ebe a na akpo kọfị na mposi nke oke bekee anyị na mgbakwunye na nsị ya nwere akwụkwọ na-eme ka ọ banye na pee ma anaghị anụ isi. Ejiri m mmiri mee akwa ọ bụla.
Anọ m na-ejuputa na 1-11-2020, m na-ejupụta ọkara nke ogige ahụ, na obere onyinye nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, na akwụkwọ na oke bekee, ma ọkachasị na osisi aubergine, nke onye agbata obi wepụrụ ma na-aga ọkụ na m edebewo ha. ikpo ahụ kpọrọ nkụ ma m na-agba mmiri mmiri n'ụba, ana m etinye mmiri na pellets fatịlaịza iji gbakwunye nitrogen ma mee ka usoro a dị ngwa.
8-11-2020 Ana m etinye akwụkwọ rabbit na kichin kichin na akwa aja aja.
18-11-2020 Nri na ahịhịa nke m na-ewepụ ma tinye mmiri mmiri, achọrọ m ijikọta ihe niile nke ọma.
Categories Ngwakọta Igodo bọtịnụ
1 Gịnị kpatara compost?
2.1 Nzọụkwụ 1. Họrọ saịtị na ogige
2.2 Nzọụkwụ 2. Akpa uwe
2.3 Nzọụkwụ 3. Nkeji nke abụọ
2.4 Nzọụkwụ 4. Moisten ikpo
2.5 Nzọụkwụ 5. Tojupụta ego
3 Ngwá ọrụ compost
4 Kedu ihe m ga-etinye na compost?
6 My mbụ compost